Shahid, Kareena Ilaa Sonakshi Xiddigaha Bollywoodka Fadeexo Iyo Ceeb Dhexda Ka Galeen Kadib Markii Muuqaalo Iyo Sawiro Anshax-xumo Laga Sameeyay Qeybtii 2-aad (+Sawiro) – Filimside.net
Shahid, Kareena Ilaa Sonakshi Xiddigaha Bollywoodka Fadeexo Iyo Ceeb Dhexda Ka Galeen Kadib Markii Muuqaalo Iyo Sawiro Anshax-xumo Laga Sameeyay Qeybtii 2-aad (+Sawiro)
Muuqaalo been abuur ah ayaa laga sameeyay jilayaashan atiriishooyinka u badan mid walbana xiligii muuqaalkan been abuurka ah laga sameeyay ayee shaaciyeen inuu been abuur yahay balse dadka markii hore run ayee umaleyeen hoos kaga bogo qeybtaa 2-aad:
Soha Ali Khan: xidigtaan waxay ku guul-dareesatay inee fanka hindiya heer sare ka gaarto balse mar ayee hadal heynta la wareegtay oo muran iyo fadeexo dhexda ka gashay kadib markii laga faafiyay muuqaal ay qaawantahay dharkana iska dhigeyso.
Ilaa hada Soha Ali Khan kama hadlin arinkaan sidaa aawged lama oga muuqaalkan inuu been abuur yahay oo xidigtaan lagu been abuurtay iyo in uu dhab yahay balse aysan daneenin inee ka hadasho.
Radhika Apte: muuqaal kamid ah filmkeeda Parched ayaa Internet-ka lagu faafiyay kahor inta aan la daawan filmka oo dhan taaso xidigtaan lagu fadeexstay hadana markale muuqaal kale ayaa laga faafiyay oo ay dadka ku tuseyso jirkeeda qeybaha qaaska ah balse labadaas muuqaalba aflaam ayee la xiriiraan dadkale ayaa wax kale ka dhigeen kuna fadeexteen xidigtaan.
Preity zinta: Atiriishada caanka ah Preity ayaa hada kahor muuqaal looga been abuurtay intii Internet-ka lasoo dhigay gabar qaawan oo qubeysaneysa ayaa la sheegay in ay iyada tahay Preity sidaas kuma aamusin sharciga ayee ku dacweysay kooxda fadeexesteen.
Ugu dambeyn waxaa si guud loo shaaciyay in muuqaalkas Preity ahen oo gabar kale tahay balse Ragg gaar ah Preity doonayee in ay ku fadeexstaan iyagana ciqaab la kulmeen.
Mallika Sherawat: Mallika si weyn ayaa looga been abuurtay gabar u ek oo aflaamta anshax-xumada sameeysa muuqaal laga duubay ayaa lagu tilmaamay inee tahay Mallika dagaal weyn ay gashay waxay dadka u cadeysay in gabadhaas iyada ahen ugu dambeyna ceebtii iyo fadeexadii loo geestay wey iska dhaqday xidigtaan.
Sonakshi Sinha: Aduun weynaha ayaa la yaabeen markii la arkay muuqaal Sonakshi Sinha nin kale dareen la wadaageyso Sonakshi oo xitaa iska diiday atoorayaasha inee shumis shaashada kula wadaagto ayaa hada kahor muuqaal been abuur ah lagu fadeexestay.
Balse xidigtaan oo la doonayey sumacadeeda iyo magaca ay ku leedahay fanka hindiya in dhulka lala galo ayaa si weyn isku difaacday sido kalean cadeysay in muuqaalkas iyada ahen oo gabar kale tahay .
Inkastoo markii hore Bollywoodka rumeysteen muuqaalkaas inee Sonakshi tahay hadana markii wax walbo la cadeeyay waxaa la ogaaday in Sonakshi looga been abuurtay muuqaalkaas anshax xumada ah.